Dagaalo iyo Madaafiic ka dhacay Maanta Magaalada Muqdisho – SBC
Dagaalo iyo Madaafiic ka dhacay Maanta Magaalada Muqdisho
Posted by Webmaster on April 1, 2012 Comments
Dagaalo goos goos ah ayaa maanta ka dhacay Degmada Dayniile ee Magaalada Muqdisho halkaasi oo ay isku hayaan dhinacyada DKMG ah iyo Amisom iyo weliba Xakrada Alshabaab oo garab ah.
Dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala gedisan ayaa Maanta ka qarxay halkaas inkastoo uu mudo kooban soconayay waxaana sida la sheegay ka dhashay khasaare soo gaaray labada dhinac ee dagaalamaya iyo dad rayid ah.
Inkastoo aan la xaqiijin Karin khasaaraha soo kala gaaray labada dhinac balse waxay ilo wareedyo ku sugan Muqdisho u sheegeen xafiiska SBC ee Magaaladaas in ay geeriyoodeen ku dhowaad 5 qof oo rayid ah.
Madaafiic xoogan ayaa la isku hogaamiyay intii uu dagaalku soconayay waxaana ay ku hoobteen madaafiicdaasi degmada Dayniile kuwaasi oo ka kala imaanayay labada dhinac ee dagaalamaya.
Xalay ayay aheyd markii saraakii ka tirsan kuwa Xarakada Alshabaab ay la hadleen idaacado ku yaala magaalada Muqdisho iyagoo u sheegay in ay qorsheynayaan weerada xarumo ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho iyagoona la wareegi doona waasida ay hadalka u dhigeene.
Maalmihii ugu dambeeyay ayay ciidamada DKMG ah iyo kuwa Amisom dagaal ku gaareen deegaano ka mid ah degmada Dayniile sida Iyagoo la wareegay isbitalkii Degmada Dayniile inkastoo ay isku horfadhiyaan labada dhinac garoonka Dayniile.
Sikastaba ha ahaatee dadweynaha ku dhaqnaa Degmada Dayniile aya amuujinaya Cabsi ay ka qabaan khasaare ka soo gaara dagaalo markale ka dhaca deegaankaas iyagoona qaarkood bilaabay in ay ka barakacaan aagaas.
SBC International Muqdsiho.